I-china iglasi yekomityi kunye nesoseti esetiweyo, i-90cc ye-Espresso yeglasi yeekomityi ezineesosi, iikomityi ezinesiphatho segolide, i-Espresso nekofu, isitya esimenyezelisiweyo esinabavelisi bendebe yeglasi kunye nabathengisi UFUXINGYE
indebe yeglasi kunye neseti yesosi, i-90cc ye-Espresso yeglasi yeNdebe enesosi, iikomityi ezinesiphatho segolide, i-Espresso nekofu, isitya esimenyezelisiweyo nendebe yeglasi
Ubume: iseti ye-2, iseti ye-4 iseti ye-6 njl
IGLASI ESPRESSO SET IBANDAKANYA: Iikomityi zeglasi ze-espresso ezine-saffer yemilo ecwengileyo okanye isosi enombala ocwebezelisiweyo okanye isosi ebomvu, nganye ikomityi yekofu engama-90cc kunye nesosi eyi-4.5 yeesentimitha. Ikomityi nganye ye-espresso ibamba i-90cc (ngaphandle kokuyizalisa phezulu). Inkulu ngokwaneleyo kwi-espresso yakho yemihla ngemihla kunye nekofu.
IBAKALA ELIPHELELEYO IBHONI ELITSHA ITSHAYINA NEGLASI: Iikomityi zeglasi ze-espresso ezineesosi ezintsha zetyina zenziwe ngomgangatho ophezulu wokhuseleko lwakho kunye noxolo lwengqondo, UKUKHOKHELA NGOKUNGENAKO, NGOKUNGENASI-TOXIC, ukumelana ne-chip kwaye womelele kakhulu.
UKUSEBENZA KUNYE NOKUQHELEKILEYO: Ngesiphatho sendebe esitofotofo, umnwe wakho unokuhamba ngokulula kuyo, ukulungele ukubamba. Isosari erim ephakanyisiweyo eneziko lokujikeleza ngokulula ukubamba ikomityi yekofu, icephe lekofu, iswekile okanye ipakethi yobisi.
I-MULTI-USAGE: Ikomityi yekofu kunye neseti yesosi zilungele i-espresso kunye nekofu. Yonwabela i-espresso yakho kolu lonwabo kwaye lungaphelelwa lixesha kuyilo lweedemasasse iikomityi ezisetiweyo.
ISIPHO SONYANGO Kwaye ngombala odonsa amehlo kunye nowodwa, sisipho esifanelekileyo kubahlobo bakho kunye nosapho kwi-Housewarming, ipati yomtshato, uSuku looMama, uSuku looTata, iKrisimesi kunye nosuku loNyaka oMtsha.
Yonwabele ubomi bakho, Yonwabele ixesha lakho lekofu kunye nathi iglasi iikomityi neesosi!
Yonwabela imvakwemini entle!
Sebenzisa iikomityi zeespresso kunye neesosi, njengokuphuza ikofu emnandi kwivenkile yekofu ephezulu. Ikomityi ye-Espresso kunye neseti yesosi zihonjiswe ngombala wegolide ocwebezelayo kunye nedessert ebuthathaka, ukhetho olululo lwexesha lakho lekofu emva kwemini. inokuphucula umgangatho wobomi babantu, kwaye ungonwabela imeko yendalo yobuhle obukhululekileyo.
Imagnethi nganye yeespresso / yekofu ibambe i-90cc okanye i-150ml, (ngaphandle kokuyizalisa phezulu), iseti ye-4 okanye iseti ye-6 bayilungele i-espresso nekofu.
Sisipho esihle nesicingisisiweyo kusuku lokuzalwa kwabahlobo, iKrisimesi, uSuku lokuBulela kunye nezinye iintsuku ezingalibalekiyo. Bayakuchukumiseka yiminqweno yakho enyanisekileyo kunye neengcinga ezinobubele.
Ingacocwa ngokulula phantsi kwamanzi abalekayo.
Ayinalo ilothe kunye nezinye izinto eziyingozi emzimbeni womntu.
Isixhobo: Iglasi yeGreyidi ePhakamileyo kunye neTshayina elitsha lethambo
Umbala: ezininzi kunye negolide
Indebe yeglasi ye-espresso ngesiphatho segolide, iDia: 5.8cm H: 8.8cm, amandla: 90ml
I-espresso van cleef saucer: Dia 14cm H 1.5cm, espresso glaze saucer: Dia 11.5cm H 1.8cm, espresso rimmed saucer: Dia 11.8cm H 1.8cm
I-espresso / ikomityi yeglasi yekofu ngaphandle kwesiphatho, iDia: 5.8cm H: 9.2cm, amandla: 150ml
Izatifikethi: I-FDA, i-SGS, i-LFGB, njl.
Ukupakisha: ibhokisi emdaka enesiciko sePET, ibhokisi yemibala, ibhokisi yesipho njl
Isampula lead time: Into yesampulu iya kuba ilungile malunga neentsuku ezili-15 emva kokuba intlawulo iqinisekisiwe.
Imveliso ekhokelela phambili: Singayigqiba imveliso yento malunga neentsuku ezingama-45-60 zokusebenza.
Zokuthunyelwa: Ngu elwandle
Egqithileyo Uyilo oluDumileyo lwaBantwana oluDumileyo kunye nesipho sezinto
Okulandelayo: Indebe yeceramic kunye neseti yesosi, i-90cc ye-Espresso Cups enesosi, iikomityi ezine-Handle yeGolide, ye-Espresso nekofu, indebe entsha ye-china indebe kunye nesosara
Iikomityi zekofu ezinesosi
Ukuma kweNdebe yeNdebe
Iseti yeNdebe yeTi
INdebe kunye neSosa
indebe yodongwe & esosweni iseti, 90cc Espresso Cu ...
Van Cleef imilo bone entsha china indebe Espresso ...
Indebe yeceramic kunye neseti yesosi, iikomityi ngeGolde ...